ထိုင်းနိုင်ငံ၌ COVID-19 ဖြစ်ပွားသူ ၁ သန်းအထိ အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိ - Xinhua News Agency
ဘန်ကောက်၊ သြဂုတ် ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ COVID-19 ကူးစက်မှု တစ်ကျော့ပြန် ကူးစက်မှု များပြားလာရာ သြဂုတ် ၂၀ ရက်အထိ ရောဂါဖြစ်ပွားသူပေါင်း ၁ သန်းကျော်အထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း နှင့် အဓိကအားဖြင့် Delta ဗီဇပြောင်း ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။သြဂုတ် ၂၀ ရက်တွင် ၁၀ ရက်အတွင်း နေ့စဉ်တွေ့ရှိမှုနှုန်း ၂၀,၀၀၀ အောက်သို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျဆင်းခဲ့ပြီး အတည်ပြုလူနာသစ် ၁၉,၈၅၁ ဦး နှင့် နိုင်ငံအတွင်း စုစုပေါင်း ကူးစက်ခံရသူ ၁,၀၀၉,၇၁၀ ဦးထိ ရှိလာကြောင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်အရ သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၄ နာရီ အတွင်း သေဆုံးသူ ၂၄၀ ဦး ရှိခဲ့ပြီး ကပ်ရောဂါစတင်သည့်အချိန်ကတည်းက စုစုပေါင်းသေဆုံးသူဦးရေ ၈,၈၂၆ ဦးရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ (Xinhua)
Thailand’s COVID-19 cases top 1 mln
BANGKOK, Aug. 20 (Xinhua) — Cumulative COVID-19 cases in Thailand surpassed 1 million on Friday, driven byacontinued surge in infections, primarily attributed to the spread of the highly contagious Delta variant.
On Friday the number of daily cases dipped below 20,000 for the first time in 10 days. With 19,851 new cases reported, and the country’s total tally now stands at 1,009,710, according to the data released by the Ministry of Public Health.
The ministry also reported 240 fatalities over the last 24 hours, taking the death toll since the start of the pandemic to 8,826. Enditem
ဩဂုတ် ၃၁ ရက် နောက်ပိုင်း အာဖဂန်နိုင်ငံ၌ တပ်ချထားရေး ဆွေးနွေးနေဆဲဟု သမ္မတဘိုင်ဒန်က ပြောကြား